တရုတ် စက်လှည့်ခြင်းနှင့် ကြိတ်ခြင်း ပေါင်းစပ် စက်အစိတ်အပိုင်း ထုတ်လုပ်သူများ နှင့် တင်သွင်းသူများ | Lingjun
ဖုန်း- +86 (0755)-86959369
Optical Industry ၊
တိကျသော Shaft အစိတ်အပိုင်းများ
လှည့်ခြင်းနှင့် ကြိတ်ခြင်း ပေါင်းစပ်စက်ပစ္စည်း အစိတ်အပိုင်းများ
တိကျသော အစိတ်အပိုင်းများ လုပ်ဆောင်ခြင်း။
တိကျသော ကြိတ်ခွဲစက် အစိတ်အပိုင်းများ လုပ်ဆောင်ခြင်း။
တိကျသော CNC စက်အစိတ်အပိုင်းများ
အားသာချက် 1: ဖြတ်တောက်ခြင်း;
အားသာချက် 2၊ လွယ်ကူသောမြန်နှုန်းမြင့်ဖြတ်တောက်ခြင်း;
အားသာချက် 3၊ workpiece မြန်နှုန်းနိမ့်သည်;
အားသာချက် 4၊ အသေးစားအပူပုံပျက်ခြင်း၊
အားသာချက် 5၊ တစ်ကြိမ် ပြီးမြောက်ခြင်း၊
အားသာချက် 6၊ ကွေးညွတ်ပုံသဏ္ဍာန်ကိုလျှော့ချ
ထုတ်ကုန်၏အားသာချက်များ- တံမြက်မရှိ၊ အသုတ်ရှေ့၊ ISO ထက်ကျော်လွန်သော မျက်နှာပြင်ကြမ်းတမ်းမှု၊ တိကျမှုမြင့်မားသည်။
ထုတ်ကုန်အမည်- လှည့်ခြင်းနှင့် ကြိတ်ခြင်း ပေါင်းစပ်စက်ပစ္စည်း အစိတ်အပိုင်းများ
ထုတ်ကုန်လုပ်ငန်းစဉ်- လှည့်ခြင်းနှင့် ကြိတ်ခြင်းဒြပ်ပေါင်း
ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း- 304 နှင့် 316 သံမဏိ၊ ကြေးနီ၊ သံ၊ အလူမီနီယံ၊ စသည်တို့။
ပစ္စည်းဝိသေသလက္ခဏာများ- ကောင်းသောချေးခံနိုင်ရည်၊ အပူခံနိုင်ရည်၊ နိမ့်သောအပူချိန်နှင့်စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများ
ထုတ်ကုန်အသုံးပြုမှု- ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာများ၊ အာကာသယာဉ်ကိရိယာများ၊ ဆက်သွယ်ရေးကိရိယာများ၊ မော်တော်ယာဥ်လုပ်ငန်း၊ အလင်းပြလုပ်ငန်း၊ တိကျသောရိုးတံအစိတ်အပိုင်းများ၊ အစားအသောက်ထုတ်လုပ်ရေးကိရိယာများ၊ ဒရုန်းများစသည်ဖြင့် အသုံးပြုသည်။
သက်သေပြခြင်းသံသရာ- 3-5 ရက်
လုပ်ငန်းစဉ်တိကျမှု- ဖောက်သည်ပုံဆွဲခြင်း၊ ဝင်လာသောပစ္စည်းများ၊ စသည်တို့အရ လုပ်ဆောင်ခြင်း။
အားသာချက် 1၊ ဖြတ်တောက်ခြင်း-
dual- spindle အလှည့်-ကြိတ်ပေါင်းစပ်စက်ယန္တရားနည်းလမ်းသည်အဆက်မပြတ်ဖြတ်တောက်ခြင်းနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ဤအဆက်မပြတ်ဖြတ်တောက်ခြင်း အမျိုးအစားသည် ကိရိယာကို အအေးခံချိန် ပိုရစေသည်၊ အကြောင်းမှာ မည်သည့်ပစ္စည်းကို စီမံဆောင်ရွက်သည်ဖြစ်စေ ဖြတ်တောက်စဉ်အတွင်း ကိရိယာမှရောက်ရှိသော အပူချိန်သည် နိမ့်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။
အားသာချက် 2၊ လွယ်ကူသော မြန်နှုန်းမြင့်ဖြတ်တောက်ခြင်း-
သမားရိုးကျ အလှည့်ကျ ကြိတ်ခွဲခြင်းနည်းပညာနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ဤ dual- spindle အလှည့်-ကြိတ်ခြင်း ပေါင်းစပ်လုပ်ဆောင်ခြင်းနည်းပညာသည် မြန်နှုန်းမြင့်ဖြတ်တောက်ရန် ပိုမိုလွယ်ကူသောကြောင့် မြန်နှုန်းမြင့်ဖြတ်တောက်ခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူးအားလုံးကို dual- spindle အလှည့်-ကြိတ်ခြင်း ပေါင်းစပ်လုပ်ဆောင်ခြင်းတွင် ထင်ဟပ်စေပါသည်။ Dual- spindle လှည့်ခြင်းနှင့် ကြိတ်ခြင်း၏ ပေါင်းစပ်ဖြတ်တောက်ခြင်း အင်အားသည် သမားရိုးကျ မြင့်မားသောဖြတ်တောက်ခြင်းထက် 30% နိမ့်ပါးသည်ဟု ဆိုကြပြီး လျှော့ချဖြတ်တောက်မှုအား လျှော့ချခြင်းဖြင့် လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် အကျိုးပြုနိုင်သည့် workpiece ပုံပျက်ခြင်း၏ radial force ကို လျှော့ချနိုင်သည်၊ သွယ်လျတိကျသော အစိတ်အပိုင်းများ။ နံရံပါးလွှာသော အစိတ်အပိုင်းများ၏ လုပ်ငန်းစဉ်အမြန်နှုန်းကို တိုးမြှင့်ရန်နှင့် ဖြတ်တောက်မှု အင်အားသည် သေးငယ်ပါက၊ ကိရိယာနှင့် စက်ကိရိယာပေါ်ရှိ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးသည် အတော်လေး သေးငယ်သည်၊ ထို့ကြောင့် dual- spindle အလှည့်-ကြိတ်စက် ဒြပ်ပေါင်းစက်ကိရိယာ၏ တိကျမှုကို ရရှိစေရန်၊ ပိုကောင်းအောင် ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။
အားသာချက် 3၊ workpiece speed နိမ့်သည်-
workpiece ၏ rotation speed သည် အတော်လေးနိမ့်နေပါက၊ ပါးလွှာသော နံရံများကို စီမံဆောင်ရွက်သည့်အခါ centrifugal force ကြောင့် အရာဝတ္တုသည် ပုံပျက်သွားလိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။
အားသာချက် 4၊ သေးငယ်သော အပူပုံပျက်ခြင်း-
dual- spindle turning-milling ဒြပ်ပေါင်းကိုအသုံးပြုသောအခါ, ဖြတ်တောက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးကိုလျှပ်ကာပြီးသားဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့်ကိရိယာနှင့်ချစ်ပ်များသည်အပူများစွာကိုယူသွားသည်နှင့်ကိရိယာ၏အပူချိန်သည်အတော်လေးနိမ့်မည်ဖြစ်ပြီး၊ အပူပိုင်းပုံသဏ္ဍာန်သည်လွယ်ကူစွာဖြစ်ပေါ်မည်မဟုတ်ပါ။
အားသာချက် 5၊ တစ်ကြိမ် ပြီးမြောက်ခြင်း-
dual- spindle turning-milling composite mechanic machine tool သည် ငြီးငွေ့ဖွယ်ကောင်းသော၊ အလှည့်ကျ၊ တူးဖော်ခြင်းနှင့် ကြိတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အားလုံးကို ပြီးမြောက်စေရန်အတွက် ကိရိယာအားလုံးကို စီမံဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုသည်၊ သို့မှသာ စက်ကိရိယာကို အစားထိုးခြင်းပြဿနာကို အလွန်ရှောင်ရှားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ workpiece ထုတ်လုပ်မှုနှင့် စီမံဆောင်ရွက်သည့် စက်ဝန်းကို တိုစေကာ ထပ်ခါတလဲလဲ ကုပ်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ရသည့် ပြဿနာများကို ရှောင်ရှားပါ။
အားသာချက် 6၊ ကွေးညွတ်ပုံပျက်ခြင်းကို လျှော့ချပါ။
dual- spindle turning-milling composite machining method ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် အထူးသဖြင့် အလယ်တွင် မပံ့ပိုးနိုင်သော ပါးလွှာပြီး ရှည်လျားသော အစိတ်အပိုင်းအချို့ကို လုပ်ဆောင်သောအခါတွင် အစိတ်အပိုင်းများ၏ ကွေးညွှတ်ပုံပျက်ခြင်းကို အလွန်လျှော့ချနိုင်သည်။
၃.၂။ အတိုင်းအတာ တိကျမှု လိုအပ်ချက်
ဤစာတမ်းသည် ပုံဆွဲခြင်း၏ အတိုင်းအတာ တိကျမှု၏ လိုအပ်ချက်များကို ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာပြီး ၎င်းကို အလှည့်ကျ လုပ်ငန်းစဉ်ဖြင့် အောင်မြင်နိုင်မလား။
ဤခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုလုပ်ငန်းစဉ်တွင်၊ တိုးမြင့်သည့်အတိုင်းအတာ၊ အကြွင်းမဲ့အတိုင်းအတာနှင့် အတိုင်းအတာကွင်းဆက်ကို တွက်ချက်ခြင်းကဲ့သို့ တစ်ချိန်တည်းတွင် အချို့သောအတိုင်းအတာပြောင်းလဲခြင်းကို လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ CNC စက်လှည့်ခြင်းကိုအသုံးပြုရာတွင်၊ လိုအပ်သောအရွယ်အစားကို ပရိုဂရမ်ရေးဆွဲခြင်း၏ အရွယ်အစားအခြေခံအဖြစ် အများဆုံးနှင့် အနိမ့်ဆုံးကန့်သတ်အရွယ်အစား၏ ပျမ်းမျှအဖြစ် ယူလေ့ရှိသည်။
၄.၃။ ပုံသဏ္ဍာန်နှင့် အနေအထား တိကျမှုအတွက် လိုအပ်ချက်များ
ပုံတွင်ဖော်ပြထားသော ပုံသဏ္ဍာန်နှင့် အနေအထားသည်းခံမှုသည် တိကျသေချာစေရန်အတွက် အရေးကြီးသောအခြေခံဖြစ်သည်။ စက်အသုံးပြုနေစဉ်အတွင်း နေရာချထားခြင်း datum နှင့် တိုင်းတာခြင်း datum ကို လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီ ဆုံးဖြတ်သင့်ပြီး အချို့သော နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များကို CNC စက်၏ အထူးလိုအပ်ချက်များနှင့်အညီ လုပ်ဆောင်နိုင်ကာ စက်၏ ပုံသဏ္ဍာန်နှင့် တည်နေရာတိကျမှုကို ထိထိရောက်ရောက် ထိန်းချုပ်နိုင်စေရန်။
မျက်နှာပြင် ကြမ်းတမ်းမှု လိုအပ်ချက်
မျက်နှာပြင် ကြမ်းတမ်းမှုသည် မျက်နှာပြင် အသေးစား တိကျမှုကို သေချာစေရန် အရေးကြီးသော လိုအပ်ချက်ဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် CNC စက်ကို ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာ ရွေးချယ်ခြင်း၊ ဖြတ်တောက်ခြင်း ကိရိယာနှင့် ဖြတ်တောက်ခြင်းဆိုင်ရာ ဘောင်များကို ဆုံးဖြတ်ခြင်းအတွက် အခြေခံဖြစ်သည်။
ပစ္စည်းနှင့် အပူကုသမှု လိုအပ်ချက်များ
ပုံတွင်ပေးထားသောပစ္စည်းနှင့် အပူကုသမှုလိုအပ်ချက်များသည် ဖြတ်တောက်ခြင်းကိရိယာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ CNC စက်တပ်ဆင်ခြင်းမော်ဒယ်များနှင့် ဖြတ်တောက်ခြင်းဆိုင်ရာဘောင်များကို ဆုံးဖြတ်ခြင်းအတွက် အခြေခံဖြစ်သည်။
ဝင်ရိုးငါးခု ဒေါင်လိုက် စက်ယန္တရားစင်တာ
ဝင်ရိုးငါးခု ဒေါင်လိုက် စက်ယန္တရားစင်တာသည် စက်မှုအင်ဂျင်နီယာနယ်ပယ်တွင် အသုံးပြုသည့် တူရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ စက်ကိရိယာကို စက်ပစ္စည်းစင်တာတွင် တစ်ကြိမ် ချိတ်မိပြီးနောက်၊ ဒစ်ဂျစ်တယ် ထိန်းချုပ်မှုစနစ်သည် မတူညီသော လုပ်ငန်းစဉ်များအလိုက် ကိရိယာကို အလိုအလျောက် ရွေးချယ်ပြောင်းလဲရန်နှင့် ဗိုင်းလိပ်တံအမြန်နှုန်း၊ အစာစားနှုန်း၊ ကိရိယာ၏ ရွေ့လျားမှုလမ်းကြောင်းတို့ကို အလိုအလျောက် ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ workpiece နှင့် အခြားသော အရန်လုပ်ဆောင်ချက်များ ၊ workpiece ၏ မျက်နှာပြင်များစွာတွင် လုပ်ငန်းစဉ်များစွာကို ပြီးမြောက်စေရန်အတွက်၊ ကိရိယာ ပြောင်းလဲမှု သို့မဟုတ် ကိရိယာရွေးချယ်မှု လုပ်ဆောင်ချက် အမျိုးမျိုးရှိသဖြင့် ထုတ်လုပ်မှု စွမ်းဆောင်ရည်ကို အလွန်တိုးတက်စေပါသည်။
Five axis vertical machining center သည် spindle axis ကို worktable ဖြင့် ဒေါင်လိုက်သတ်မှတ်ထားသော machining center ကို ရည်ညွှန်းသည်။ ၎င်းသည် အဓိကအားဖြင့် ပန်းကန်ပြား၊ ပန်းကန်၊ မှိုနှင့် သေးငယ်သော အခွံရှုပ်ထွေးသော အစိတ်အပိုင်းများကို လုပ်ဆောင်ရန်အတွက် သင့်လျော်သည်။ ဝင်ရိုးငါးခု ဒေါင်လိုက် စက်ယန္တရားစင်တာသည် ကြိတ်ခွဲခြင်း၊ ငြီးငွေ့ဖွယ်ကောင်းခြင်း၊ တူးဖော်ခြင်း၊ ပုတ်ခြင်းနှင့် ချည်ဖြတ်ခြင်းတို့ကို အပြီးသတ်နိုင်သည်။ ဝင်ရိုးငါးခု ဒေါင်လိုက် စက်ယန္တရားစင်တာသည် ဝင်ရိုးနှစ်ချောင်း ချိတ်ဆက်မှု သုံးခုဖြစ်ပြီး ဝင်ရိုးသုံးခု ချိတ်ဆက်မှုကို သိရှိနိုင်သည်။ အချို့ကို ပုဆိန်ငါးခြောက်ချောင်းဖြင့် ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ ဝင်ရိုးငါးခု ဒေါင်လိုက် စက်ယန္တရားစင်တာ၏ ကော်လံအမြင့်ကို ကန့်သတ်ထားပြီး ဝင်ရိုးငါးခု ဒေါင်လိုက် စက်ယန္တရားစင်တာ၏ အားနည်းချက်ဖြစ်သည့် box type workpiece ၏ machining range ကို လျှော့ချသင့်သည်။ သို့သော်၊ ဝင်ရိုးငါးခု ဒေါင်လိုက် စက်ယန္တရား စင်တာသည် workpiece clamping နှင့် positioning အတွက် အဆင်ပြေသည်။ ဖြတ်တောက်ခြင်းကိရိယာ၏ ရွေ့လျားမှုလမ်းကြောင်းသည် လေ့လာရန်လွယ်ကူသည်၊ အမှားရှာပြင်သည့်ပရိုဂရမ်သည် စစ်ဆေးတိုင်းတာရန် အဆင်ပြေပြီး ပြဿနာများကို ပိတ်ရန် သို့မဟုတ် ပြုပြင်မွမ်းမံရန်အတွက် အချိန်မီတွေ့ရှိနိုင်သည်။ အအေးခံသည့်အခြေအနေသည် ထူထောင်ရန်လွယ်ကူသည်၊ ဖြတ်တောက်ထားသောအရည်သည် ကိရိယာနှင့် စက်ကိရိယာမျက်နှာပြင်ကို တိုက်ရိုက်ရောက်ရှိနိုင်သည်။ သြဒီနိတ် axes သုံးခုသည် Cartesian သြဒိနိတ်စနစ်နှင့် ကိုက်ညီသောကြောင့် ခံစားချက်သည် အလိုလိုသိနိုင်ပြီး ပုံ၏ရှုထောင့်နှင့် ကိုက်ညီပါသည်။ Chips များသည် ဖယ်ရှားရန်နှင့် ကြွေကျရန် လွယ်ကူသောကြောင့် ပြုပြင်ထားသော မျက်နှာပြင်ကို ခြစ်မိခြင်းမှ ကင်းဝေးစေပါသည်။ သက်ဆိုင်ရာ အလျားလိုက် စက်ယန္တရားစင်တာနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ၎င်းသည် ရိုးရှင်းသောဖွဲ့စည်းပုံ၊ သေးငယ်သောကြမ်းပြင်ဧရိယာနှင့် ဈေးနှုန်းချိုသာသော အားသာချက်များရှိသည်။
CNC စက်သည် CNC စက်ကိရိယာ၏ ပင်မဖြစ်သည်။ ခေတ်မီ CNC စက်များသည် CNC (ကွန်ပြူတာ ဂဏန်းထိန်းချုပ်မှု) ၏ ပုံစံဖြစ်သည်။ ဤ CNC စက်သည် ယေဘူယျအားဖြင့် ပရိုဂရမ်ပြုလုပ်ထားသောဆော့ဖ်ဝဲလ်ပုံစံဖြင့် ဂဏန်းထိန်းချုပ်မှုလုပ်ဆောင်ချက်ကို နားလည်ရန် မိုက်ခရိုပရိုဆက်ဆာများစွာကို အသုံးပြုထားသောကြောင့် ၎င်းကို software NC ဟုခေါ်သည်။ CNC စနစ်သည် input data အရ စံပြ ရွေ့လျားမှုလမ်းကြောင်းကို ပေါင်းစပ်ကာ စက်ပစ္စည်းအတွက် လိုအပ်သော အစိတ်အပိုင်းများသို့ ထုတ်ပေးသည့် အနေအထား ထိန်းချုပ်ရေးစနစ်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် NC စက်သည် အဓိကအားဖြင့် အခြေခံ အစိတ်အပိုင်း (၃) ခုဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်- input, processing and output. ဤလုပ်ငန်းအားလုံးကို ကွန်ပျူတာစနစ်ပရိုဂရမ်ဖြင့် စနစ်တကျဖွဲ့စည်းထားသောကြောင့် စနစ်တစ်ခုလုံး ညှိနှိုင်းလုပ်ဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
1) ထည့်သွင်းကိရိယာ- NC ညွှန်ကြားချက်ကို NC စက်သို့ ထည့်သွင်းပါ။ မတူညီသော ပရိုဂရမ်ဝန်ဆောင်မှုပေးသူအရ ကွဲပြားခြားနားသော ထည့်သွင်းကိရိယာများရှိသည်။ ကီးဘုတ်ထည့်သွင်းမှု၊ ဒစ်ခ်ထည့်သွင်းမှု၊ cad/cam စနစ်၏ တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မှုမုဒ်ထည့်သွင်းမှုနှင့် သာလွန်ကွန်ပျူတာနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော DNC (တိုက်ရိုက်ဂဏန်းထိန်းချုပ်မှု) ထည့်သွင်းမှုတို့ ပါဝင်သည်။ လက်ရှိတွင်၊ များစွာသောစနစ်များသည် photoelectric စာဖတ်စက်၏ စက္ကူတိပ်ထည့်သွင်းမှုပုံစံရှိနေဆဲဖြစ်သည်။
(၂) စက္ကူခါးပတ် ထည့်သွင်းခြင်း မုဒ်။ စက္ကူတိပ်ဓာတ်ပုံလျှပ်စစ်ဖတ်စက်သည် အပိုင်းပရိုဂရမ်ကိုဖတ်နိုင်သည်၊ စက်ကိရိယာ၏ရွေ့လျားမှုကို တိုက်ရိုက်ထိန်းချုပ်နိုင်သည်၊ သို့မဟုတ် စက္ကူတိပ်၏အကြောင်းအရာများကို မှတ်ဉာဏ်ထဲသို့ဖတ်နိုင်ပြီး မှတ်ဉာဏ်တွင်သိမ်းဆည်းထားသည့်အပိုင်းပရိုဂရမ်ဖြင့် စက်ကိရိယာ၏ရွေ့လျားမှုကို ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။
(၃) MDI လက်စွဲ ဒေတာ ထည့်သွင်းခြင်း မုဒ်။ အော်ပရေတာသည် ပိုတိုသော ပရိုဂရမ်များအတွက် သင့်လျော်သော လည်ပတ်မှု panel ပေါ်ရှိ ကီးဘုတ်ကို အသုံးပြု၍ စက်လုပ်ငန်းပရိုဂရမ်၏ ညွှန်ကြားချက်များကို ထည့်သွင်းနိုင်သည်။
ထိန်းချုပ်ကိရိယာ၏ အခြေအနေကို တည်းဖြတ်ရာတွင်၊ ဆော့ဖ်ဝဲကို စီမံဆောင်ရွက်ပေးသည့် ပရိုဂရမ်ကို ထည့်သွင်းပြီး ထိန်းချုပ်ကိရိယာ၏ မှတ်ဉာဏ်တွင် သိမ်းဆည်းရန်အတွက် ဆော့ဖ်ဝဲကို အသုံးပြုသည်။ ဤထည့်သွင်းနည်းကို ပြန်သုံးနိုင်သည်။ ဤနည်းလမ်းကို ယေဘုယျအားဖြင့် manual programming တွင်အသုံးပြုသည်။
ဆက်ရှင်ပရိုဂရမ်းမင်းလုပ်ဆောင်ချက်ပါရှိသော NC စက်တွင်၊ မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ ပြဿ နာများအတိုင်း၊ မတူညီသော မီနူးများကို ရွေးချယ်နိုင်ပြီး၊ လူသား-ကွန်ပြူတာ ဆွေးနွေးမှုနည်းလမ်းဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ အတိုင်းအတာနံပါတ်များကို ထည့်သွင်းခြင်းဖြင့် လုပ်ဆောင်ခြင်းပရိုဂရမ်ကို အလိုအလျောက် ထုတ်ပေးနိုင်သည်။
(1) DNC တိုက်ရိုက်ဂဏန်းထိန်းချုပ်မှုထည့်သွင်းမှုမုဒ်ကို လက်ခံကျင့်သုံးသည်။ CNC စနစ်သည် သာလွန်ကွန်ပျူတာရှိ အစိတ်အပိုင်းများကို လုပ်ဆောင်နေစဉ်တွင် အောက်ပါပရိုဂရမ်များကို ကွန်ပျူတာမှ လက်ခံရရှိပါသည်။ DNC ကို cad/cam ဆော့ဖ်ဝဲလ်မှ ဒီဇိုင်းထုတ်ပြီး အစိတ်အပိုင်းပရိုဂရမ်ကို တိုက်ရိုက်ထုတ်ပေးသည့် ရှုပ်ထွေးသော workpiece တွင် DNC ကို အများအားဖြင့် အသုံးပြုသည်။
2) သတင်းအချက်အလက် စီမံဆောင်ရွက်ပေးခြင်း- ထည့်သွင်းသည့် ကိရိယာသည် လုပ်ဆောင်ခြင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို CNC ယူနစ်သို့ ပေးပို့ပြီး ၎င်းကို ကွန်ပျူတာမှ အသိအမှတ်ပြုထားသော အချက်အလက်အဖြစ် စုစည်းပေးသည်။ သတင်းအချက်အလက်လုပ်ဆောင်ခြင်းအပိုင်းသည် ထိန်းချုပ်မှုပရိုဂရမ်အရ အဆင့်တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့် သိမ်းဆည်းပြီး လုပ်ဆောင်ပြီးနောက်၊ ၎င်းသည် servo စနစ်နှင့် ပင်မရွေ့လျားမှုထိန်းချုပ်မှုအပိုင်းသို့ အထွက်ယူနစ်မှတစ်ဆင့် အနေအထားနှင့် အမြန်နှုန်းအမိန့်များကို ပေးပို့သည်။ CNC စနစ်၏ ထည့်သွင်းမှုဒေတာတွင် အစိတ်အပိုင်းများ၏ အကြမ်းဖျင်းအချက်အလက်များ (အစမှတ်၊ အဆုံးမှတ်၊ မျဉ်းဖြောင့်၊ မျဉ်းကွေးစသည်)၊ လုပ်ဆောင်မှုအမြန်နှုန်းနှင့် အခြားသော အရန်စက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာ အချက်အလက် (ဥပမာ-ကိရိယာပြောင်းလဲမှု၊ မြန်နှုန်းပြောင်းလဲမှု၊ အအေးခံခလုတ် စသည်ဖြင့်)၊ အချက်အလက်လုပ်ဆောင်ခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ interpolation လုပ်ဆောင်ခြင်းမပြုမီ ပြင်ဆင်မှုကို အပြီးသတ်ရန်ဖြစ်သည်။ ဒေတာလုပ်ဆောင်ခြင်းပရိုဂရမ်တွင် ကိရိယာအချင်းဝက်လျော်ကြေးပေးခြင်း၊ မြန်နှုန်းတွက်ချက်ခြင်းနှင့် အရန်လုပ်ဆောင်မှုလုပ်ဆောင်ခြင်းတို့လည်း ပါဝင်သည်။
3) Output device- အထွက်ကိရိယာကို servo ယန္တရားနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည်။ အထွက်ကိရိယာသည် controller ၏အမိန့်အရ ဂဏန်းသင်္ချာယူနစ်၏ အထွက်နှုန်းကို လက်ခံရရှိပြီး သြဒီနိတ်တစ်ခုစီ၏ servo ထိန်းချုပ်မှုစနစ်သို့ ပေးပို့သည်။ ပါဝါချဲ့ထွင်ပြီးနောက်၊ လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီ စက်ကိရိယာ၏ရွေ့လျားမှုကို ထိန်းချုပ်ရန်အတွက် servo စနစ်အား မောင်းနှင်သည်။
ကြီးမားသော CNC စက်ကိရိယာ မိတ်ဆက် ၃
စက်လက်ခံသည် CNC စက်၏အဓိကကိုယ်ထည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် အိပ်ရာ၊ အောက်ခံ၊ ကော်လံ၊ အလင်းတန်း၊ လျှောခုံ၊ အလုပ်စားပွဲ၊ ခေါင်းအုံး၊ အစာကျွေးသည့် ယန္တရား၊ ကိရိယာကိုင်ဆောင်ထားသူ၊ အလိုအလျောက် ပြောင်းလဲသည့်ကိရိယာနှင့် အခြားစက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းများ ပါဝင်သည်။ ၎င်းသည် CNC စက်ကိရိယာပေါ်တွင် ဖြတ်တောက်ခြင်း အမျိုးမျိုးကို အလိုအလျောက် ပြီးမြောက်စေမည့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သမားရိုးကျစက်ကိရိယာနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက CNC စက်ကိရိယာ၏ အဓိကကိုယ်ထည်သည် အောက်ပါဖွဲ့စည်းပုံသွင်ပြင်လက္ခဏာများရှိသည်။
1) မြင့်မားသောတင်းကျပ်မှု၊ ငလျင်ဒဏ်ခံနိုင်ရည်မြင့်မားသောစက်ကိရိယာဖွဲ့စည်းပုံအသစ်ကိုလက်ခံကျင့်သုံးသည်။ စက်ကိရိယာ၏ တောင့်တင်းမှုနှင့် ငလျင်ဒဏ်ခံနိုင်ရည်အား မြှင့်တင်ရန်အတွက်၊ တည်ဆောက်ပုံစနစ်၏ တည်ငြိမ်တောင့်တင်းမှု၊ စိုစွတ်မှု၊ တည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းများ၏ အရည်အသွေးနှင့် သဘာဝကြိမ်နှုန်းတို့ကို ပုံမှန်အားဖြင့် မြှင့်တင်ပေးသည်၊ ထို့ကြောင့် စက်ကိရိယာ၏ အဓိကကိုယ်ထည်ကို မြှင့်တင်ရန်၊ CNC စက်ကိရိယာ၏ စဉ်ဆက်မပြတ် နှင့် အလိုအလျောက်ဖြတ်တောက်ခြင်း လိုအပ်ချက်များနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေနိုင်သည်။ စက်ကိရိယာ၏ဖွဲ့စည်းပုံအပြင်အဆင်ကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေခြင်း၊ အပူလျှော့ချခြင်း၊ အပူချိန်မြင့်တက်မှုကို ထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့် အပူနေရာရွှေ့ပြောင်းခြင်းလျော်ကြေးငွေကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ပင်မစက်အပေါ် အပူပုံပျက်ခြင်း၏လွှမ်းမိုးမှုကို လျှော့ချနိုင်သည်။
2) စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် spindle servo drive နှင့် feed servo drive ကိရိယာများကို CNC စက်ကိရိယာများ၏ ဂီယာကွင်းဆက်ကို အတိုချုံ့ပြီး စက်ကိရိယာများ၏ စက်ကိရိယာများ၏ ဂီယာစနစ်၏ ဖွဲ့စည်းပုံကို ရိုးရှင်းစေရန်အတွက် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုပါသည်။
3) မြင့်မားသော ဂီယာထိရောက်မှု၊ တိကျမှု၊ ကွာဟချက်မရှိသော ဂီယာကိရိယာနှင့် ရွေ့လျားနေသော အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သည့် ဘောလုံးဝက်အူခွံ၊ ပလပ်စတစ်လျှောလမ်းညွန်၊ လိုင်းရိုးလှိမ့်လမ်းညွှန်၊ ရေအားလျှပ်စစ်လမ်းညွှန်၊ စသည်တို့ကို လက်ခံပါ။
CNC စက်ကိရိယာများ၏ လုပ်ဆောင်ချက်ကို အပြည့်အဝလုပ်ဆောင်နိုင်စေရန်အတွက် အရန်စက်ပစ္စည်းသည် လိုအပ်ပါသည်။ အသုံးများသော အရန်ကိရိယာများ ပါဝင်သည်- pneumatic၊ ဟိုက်ဒရောလစ် ကိရိယာ၊ ချစ်ပ် ဖယ်ရှားရေး ကိရိယာ၊ အအေးခံ နှင့် ချောဆီ ကိရိယာ၊ rotary table နှင့် CNC ပိုင်းခြားသော ခေါင်း၊ အကာအကွယ်၊ အလင်းရောင် နှင့် အခြား အရန်ပစ္စည်းများ
ယခင်- CNC စက်ကိရိယာအစိတ်အပိုင်းများ
Cnc Machining အစိတ်အပိုင်းများ
ကြိတ်ခွဲစက် အစိတ်အပိုင်းများကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်း။
လိပ်စာ- B301၊ အမှတ် 21၊ စက်မှုရိပ်သာလမ်း၊ Shiwei Pinggang၊ Shiwei အသိုက်အဝန်း၊ Ma Tian လမ်း၊ Guangming ခရိုင်၊ Shenzhen
NC စက်စက်၏ ဘေးကင်းသောလည်ပတ်မှု
1. Computer Simulation System ကိုအသုံးပြုခြင်း...
စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ တိကျမှုကို ထိခိုက်စေသောအချက်များ...